कसरी मेरो इंस्टाग्राम खाता मेटाउने वा यसलाई अस्थायी रूपमा निष्क्रिय गर्ने ग्याजेट समाचार
इन्स्टाग्राम सबैभन्दा लोकप्रिय सामाजिक नेटवर्कहरू मध्ये एक भएको छ विश्वव्यापी। यसको वृद्धि उल्कास्पद रहेको छ, र यो पहिले नै विश्वमा दोस्रो सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने सामाजिक नेटवर्क हो। अघिल्ला अवसरहरूमा हामीले यसका बारेमा तपाईसँग कुरा गरेका छौं, विशेष गरेर यसबाट अझ बढी प्राप्त गर्ने तरिकाहरूको बारेमा, यस नेटवर्कमा अनुयायीहरू प्राप्त गर्ने तरिकाको रूपमा.
यसको लोकप्रियताको बावजुद, सबै प्रयोगकर्ताहरू इन्स्टाग्रामसँग समान रूपमा सन्तुष्ट हुँदैनन्। त्यहाँ कोही छन् जो अनुप्रयोग को उपयोग गर्न रोक्न चाहान्छन्, किन कि तिनीहरू अन्तमा आफ्नो खाता मेट्न को लागी। हुनसक्छ तपाई पनि तपाईं सामाजिक नेटवर्कमा तपाईंको खाता मेटाउने सोचमा हुनुहुन्छ। तर तपाइँ यस गर्न सक्नुहुने ठोस तरिका थाहा छैन। हामी यसलाई तल तपाईलाई व्याख्या गर्नेछौं।
इन्स्टाग्रामको मामलामा हामीसँग दुई विकल्पहरू उपलब्ध छन्। एकातिर, हामी खाता निष्क्रिय गर्न सक्दछौं, जुन यो होइन कि हाम्रो प्रोफाइल सामाजिक नेटवर्कमा मेटाईएको छ, तर यो सक्रिय वा देखिने छैन हामी यसलाई फेरि प्रविष्ट नगरेसम्म। यो एक विकल्प हो जुन तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं यसमा डाटा हराउन चाहनुहुन्न, वा यदि तपाईं यसलाई प्रयोगबाट ब्रेक लिन चाहनुहुन्छ भने।
यदि तपाइँ के चाहानुहुन्छ भने तपाइँको इन्स्टाग्राम खातालाई मेटाउने हो, यसको मतलब यो हो कि प्रोफाइल र यसमा सबै सामग्रीहरू पूर्ण रूपमा मेटाइनेछ। त्यसोभए तपाईंसँग फेरि कहिले पनि उनीहरूको पहुँच हुने छैन। यो एक अधिक कट्टरपन्थी निर्णय हो, जुन हामीले धेरै राम्रो सोच्न पर्छ, ताकि यस निर्णयमा हतार नगर्न। थप रूपमा, सबै डाटा गुमाउनुको तथ्यको अर्थ यो हो कि हामीले हामीले सामाजिक नेटवर्कमा अपलोड गरेका सबै कुराको प्रतिलिपि बनाउनुपर्दछ, किनकि अन्यथा हामीले यसलाई गुमाउनेछौं। त्यसैले हामीले यो सबै डाउनलोड गर्नुपर्दछ, भिडियो सहित.
अर्को विकल्प उपलब्ध छ, तपाईको फोनबाट अनुप्रयोग हटाउनु हो। यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, यो केहि समयको लागि यसलाई रोक्नको लागि हो, ताकि तपाइँ सबै दिन सामाजिक नेटवर्कमा नहुनुहोस्। यो त्यस्तो चीज हो जुन हामीलाई यसको प्रयोगबाट विश्राम लिन मद्दत गर्दछ। तल हामी यी प्रत्येक विकल्पहरूको बारेमा थप वर्णन गर्दछौं।
1 तपाईंको इन्स्टाग्राम खाता मेटाउनुहोस्
2 तपाईंको खातालाई अस्थायी रूपमा निष्क्रिय गर्नुहोस्
3 अनुप्रयोग हटाउनुहोस्
तपाईंको इन्स्टाग्राम खाता मेटाउनुहोस्
सबै भन्दा पहिले हामी विकल्पमा फोकस गर्छौं जसले ट्यूटोरियललाई यसको नाम दिन्छ, जुन तपाईंको इन्स्टाग्राम खाताको मेटाउने काम हो। हामीले वर्णन गरिसकेका छौं, यो अझ चरम निर्णय हो। किनभने यो मानिन्छ कि हामीले अपलोड गरेका सबै सामग्री, हाम्रो प्रोफाईलको साथ, सामाजिक नेटवर्कबाट स्थायी रूपमा हराउनेछ। त्यसोभए यदि हामीसँग सामाजिक नेटवर्कमा धेरै फोटोहरू अपलोड गरिएको छ भने, केहिका लागि यो सजिलो निर्णय नहुन सक्छ।
क्रमशः इन्स्टाग्राम खाता मेट्नका लागि, सामाजिक नेटवर्क नै हामीलाई यसको लागि एक उपकरण दिन्छ। यो एक वेबसाइट हो जहाँ हामी क्रमबद्ध चरणहरू अनुसरण गर्न सक्छौं जुनसँग त्यसमा हाम्रो खाताको निश्चित मेटाउने कार्य पूरा गर्न। तिमी सक्छौ यसमा यो लिंक पहुँच गर्नुहोस्.
यहाँ हामीले मात्र गर्नु पर्छ, यदि हामीसँग सेसन सुरु भएको छैन भने, खाता मेटाउन सक्षम हुन लगइन गर्नु हो। इन्स्टाग्रामले प्राय: जसो कारण तपाईले यो निर्णय लिनु भएको भनेर सोध्दछ। यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने तपाइँले कारण दिन सक्नुहुन्छ, यद्यपि यो कुनै पनि केसमा अनिवार्य छैन। यो साधारण चरणको साथ, हामी पहिले नै सामाजिक नेटवर्कमा हाम्रो खाता मेटाउन अघि बढ्यौं, केहि स्थायी।
यसको मतलब यो हो कि यदि तपाइँ लगइन गर्न कोशिस गर्नुभयो भने, यसले तपाइँलाई बताउँछ कि प्रयोगकर्ता अब अवस्थित छैन। त्यसैले प्रयोगकर्ता नाम नि: शुल्क छ, जसको मतलब हो कि अर्को व्यक्तिले यसको प्रयोग गर्न सक्नेछ जब तिनीहरूले सामाजिक नेटवर्कमा दर्ता गर्छन्।
तपाईंको खातालाई अस्थायी रूपमा निष्क्रिय गर्नुहोस्
यदि अघिल्लो विकल्प केहि चरम छ भने, इन्स्टाग्रामले हामीलाई खाता निष्क्रिय गर्न अर्को तरिका प्रयोग गर्न अनुमति दिँदछ। यो एक हो विकल्प भनिन्छ अक्षम वा अस्थायी रूपमा तपाइँको खाता निष्क्रिय। यस विधिमा, सामाजिक नेटवर्कमा तपाईंको प्रोफाइल मेटिने छैन, तर निस्क्रिय पारिनेछ, ताकि अन्य प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई देख्न सक्नेछैनन्, तर तपाईंले यसमा अपलोड गर्नुभएको सामग्री, फोटो वा भिडियो, र सन्देशहरू रहिरहनेछन्। सबै समय।
यो एक राम्रो विकल्प हो यदि तपाइँ सामाजिक नेटवर्क को उपयोग गरेर थकित हुनुहुन्छ, तर यो सम्भव छ कि निकट भविष्यमा तपाइँले यसलाई फेरि प्रयोग गर्नुहुनेछ। यस्तो अवस्थामा, तपाईंको खातालाई अस्थायी रूपमा निष्क्रिय गर्नु उत्तम विकल्प हो। जब तपाई फेरि इन्स्टाग्राम प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईले आफ्नो खातामा लग ईन गर्नु पर्छ र सबै कुरा सामान्यमा फर्किन्छ।
यस अवस्थामा, हामीसँग यो गर्न दुई तरिकाहरू छन्। यदि तपाईँ चाहानु हुन्छ भने, तपाईं यो लिंक प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ तपाईं केवल आफ्नो खाताको पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ र एक कारण (वैकल्पिक) दिनुपर्दछ, किन तपाईं यो लिदै हुनुहुन्छ? खाता निष्क्रिय गर्न निर्णय। यी चरणहरूको साथ, खाता निष्क्रिय हुन्छ, जबसम्म तपाईं फेरि इन्स्टाग्राममा प्रवेश गर्नुहुन्न।
तपाईं प्रोफाइल सम्पादन गर्न विकल्पमा पनि यो गर्न सक्नुहुनेछ, तर अनुप्रयोगमा होइन, तर तपाईले ब्राउजरमा लग ईन गर्नुपर्नेछ। एप्लिकेसनमा भएदेखि हामीसँग हाम्रो खाता अस्थायी रूपमा असक्षम गर्ने सम्भावना छैन। यसैले यस अवस्थामा, यो जहिले पनि ब्राउजरमा पहुँच गर्नुपर्नेछ, या त कम्प्युटरमा वा तपाईंको मोबाइल फोनमा। फेरि, खाता निष्क्रिय रहनेछ जब सम्म तपाईं यसलाई पुन: लग ईन गर्ने निर्णय गर्नुहुन्न। जब तपाईं यो गर्नुहुन्छ, सबै पछि सामान्यमा फर्किनेछ, तपाईंको सामग्री अझै पनी छ।
अन्ततः, दोस्रो जस्तै समान विकल्प, जुन तपाईं लिन सक्नुहुनेछ यदि तपाईं केही समयको लागि इन्स्टाग्राम प्रयोग रोक्न चाहनुहुन्छ भने। तपाईंले सायद याद गर्नुभयो कि तपाईं सामाजिक नेटवर्क धेरै नै प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, वा तपाईं यसलाई अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न रोक्न चाहनुहुन्छ, किनकि तपाईं यसलाई प्रयोग गरिरहनुको उपयोगिता देख्नुहुन्न।
इन्स्टाग्राम पहुँच गर्ने सब भन्दा साधारण तरिका भनेको तपाईको मोबाईल फोनबाट हो। यस अवस्थामा, तपाईले आफ्नो फोनबाट अनुप्रयोग हटाउनमा शर्त बनाउन सक्नुहुन्छ। यस तरीकाले तपाई प्राय आफ्नो प्रोफाइल वा अनुप्रयोग बारम्बार प्रविष्ट गर्नुहुन्न। एन्ड्रोइडमा अनुप्रयोग मेटाउने तरिका सजिलो छ, केवल आईकन होल्ड गर्नुहोस् र यसलाई रद्दीटोकरीमा तान्नुहोस्। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, तपाईं यसलाई अनुप्रयोगबाट यो सेक्शनबाट पनि मेटाउन सक्नुहुनेछ।
यसैले, जब केहि समय पछि, तपाईं पछाडि जान चाहानुहुन्छ, मात्र अनुप्रयोग पुन: स्थापना गर्नुहोस् र लग इन गर्नुहोस्। तपाईंको प्रोफाइल पहिले जस्तै जारी राख्नेछ, तपाईंको फोटोहरूको साथ र सन्देशहरू उही साइटमा हुनेछ। यो अर्को विकल्प हो, जुन तपाईं समय-समयमा सामाजिक नेटवर्कबाट ब्रेक लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईं विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सामाजिक नेटवर्क » कसरी मेरो इन्स्टाग्राम खाता मेटाउने
तपाईको म्याकमा टेक्स्ट फन्टहरू कसरी स्थापना गर्ने
Argus प्रो, हामी Reolink बाट भिडियो निगरानीमा भर्खरको विश्लेषण गर्दछौं